Training Courses - Cellar Door Distribution
ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ home / wine knowledge / ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ https://youtu.be/U9dGll5kApcဝိုင်ကောင်းတခွက်ဟာသောက်ဖို့ မိနစ်ပိုင်းပဲကြာပေမယ့် စပျစ်သီးကနေ ဝိုင်ပုလင်းထဲထိ ရောက်ဖို့အတွက် အချိန်ယူရသလို အဆင့်အများကြီးကျော်ဖြတ်ရပါတယ် ဒီလို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးအကြာမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားက အေးသာယာ မှ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်များ၊ စေတနာအပြည့်နဲ့ ကြိုးစားတဲ့ ချစ်ခင်ရတဲ့ အေးသာယာအဖွဲ့သား တွေရဲ့ မြန်မာ့ဝိုင်ဆိုပြီးခေါ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့အကောင်းဆုံးဝိုင်များထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပုံကို အမှတ်တရအနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် အေးသာယာဝိုင်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ပြည်တွင်းမှာတင် အဆင့်အတန်းမီဝိုင်များကို အားလုံးတတ်နိုင်မည့်ဈေးနှင့် ပြည်သူတွေဆီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်… It only takes minutes to haveagood wine but it takesatremendous amount of time and effort […]
ကိုင်းဆက်စပျစ်ပင်စိုက်ပျိူးခြင်း home / wine knowledge / ကိုင်းဆက်စပျစ်ပင်စိုက်ပျိူးခြင်းhttps://youtu.be/MlVBH_PHEdQဝိုင်ရဲ့အသက်စပျစ်ခက် လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ဝိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ #ကိုင်းဆက်စပျစ်ပင်စိုက်ပျိူးခြင်း ကို အေးသာယာချစ်သူတွေဗဟုသုတရစေဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်… We all know that grapes are the main ingredients for making wine. That’s why we are proudly sharing the planting of Aythaya’s vines.
ကိုင်းခုတ်စိုက်ပျိုးခြင်း home / wine knowledge / ကိုင်းခုတ်စိုက်ပျိုးခြင်း ဝိုင်ဖြစ်လာဖို့အတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေ အရမ်းများပါတယ် ဝိုင်ကောင်းတခွက်ရစေဖို့အတွက် နောက်ကွယ်ကလုပ်ဆောင်ရတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေက မလွယ်ကူလှပါဘူး အရှေ့တောင်အာရှမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အရင်ကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုကို အခက်အခဲများ စိန်ခေါ်မှုများကြားကပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးဝိုင်အဖြစ် အေးသာယာကနေ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် စပျစ်သီးတိုင်းဟာလည်း ဝိုင်ထုတ်လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အနောက်တိုင်းနေရာဒေသအချို့မှာပေါက်တဲ့စပျစ်မျိုးတွေကသာ ဝိုင်ထုတ်နိုင်ပါတယ် စပျစ်စိုက်ပျိုးနည်းကလည်း ဝိုင်ကောင်းရစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့နေရာကပါဝင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့်အေးယာသာကနေ #စပျစ်ကိုင်းခုတ်စိုက်ပျိုးခြင်း အကြောင်းကိုသိစေဖို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် It takesalot of processes behindagood wine. Once, it was thought impossible to grow vines in SouthEast Asia. […]
Ferrarelle home / wine knowledge / Ferrarelle Ferrarelle is the preferred water of Italian families. It starts life in the uncontaminated peaks of Southern Italy and, afteralong underground journey down the slopes of the volcano of Roccamonfina, it springs forth from the only cold geyser in Europe. A true miracle of nature,a[…]
EVIAN home / wine knowledge / EVIAN Our water gets its unique cool, crisp taste from its 15 year journey through the French Alps. It starts as snow and rain and travels slowly through layers of glacial rocks where it becomes naturally filtered and enhanced with electrolytes and minerals. Nature gives our water everything it […]
Boncafe History home / wine knowledge / Boncafe History It was 1962. Mr W. E. Huber,aSwiss National and commodities trader, hadachance encounter with an expatriate wife who was lamenting about havingahard time findingadecent cup of coffee in Singapore. Inspired by their exchange, he openedasmall business […]
Aythaya Vineyard home / wine knowledge / Aythaya Vineyard As the experts know: Great wines start in the vineyard!! Welcome to the village of Aythaya, near Taunggyi, the capital of Shan State and the site of the first vineyard in Myanmar. Why Aythaya? This question deserves comprehensive answers. Firstly, the vineyard is close to famous […]
Wine and Fish Pairing home / wine knowledge / Wine and Fish Pairing (English Version Below)ဝိုင်ချစ်သူတို့ရေဒီနေ့အတွက် ရွေးချယ် ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ဝိုင်အမျိုးအစားအလိုက် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ ငါးအမျိုးအစားတွေအကြောင်းပါ။ ????ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ White Wine ဆိုရင် ငါးနဲ့ တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဝိုင်အမျိုးအစားတွေအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ငါးအမျိုးမျိုးအကြောင်းကို Cellar Door Distribution မှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။✅ အီတလီနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ Pinot grigio၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Sauvignon Blanc နဲ့ Chardonnay, Champagne တို့ကိုဆိုရင် Baked လုပ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ငါးတစ်မျိုးမျိုး နဲ့တွဲဖက်သုံးဆောင်သင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ – […]